Showing ४१-५० of १७४ items.
ल्होसारमा गोरु काट्नेलाई पक्रिने सरकारको नीतिको विरोध
पथरी । गुरुङ समुदायको महान चाँड ल्होसार कार्यक्रममा वक्ताहरुले गोरु काट्नेलाई पक्रिने नीतिको विरोध गरेका छन् । आइतबार मोरङ पथरीशनिश्चरे—१, स्थित तमू बौद्ध गुम्बाको आयोजनामा भएको सांस्कृतिक तथा शुभकामना आदानप्रदान कार्यक्रममा सो कुरा बताएको हो । वक्ताहरुले शुभकामना मन्तब्य दिने क्रममा गोरु काटेको अभियोगमा पक्राउ गरेर मुद्धा चलाउने प्रकृयाको अन्त्य हुनुपर्ने माग गरेका छन् । उनिहरुले जातीय सांस्कृती अनुसार गोरु काट्नेलाई काट्न दिनुपर्ने बताएका थिए । ल्होसार, साकेला, चासोक तङ्नाम, माघी, माघे संक्रान्ति लगायतको चाँडहरुमा दिइन्दै आएको राष्ट्रिय विदा पुनः स्थापना गर्न समेत माग गरेका छन् । संघ
प्रकाशित मितिः पुष १५, २०७५
८४३ पटक पढिएको
पानी थाप्न स्थानीयवासीको लर्को
यासोक । यासोक बजारमा एका बिहानै पानी छोडेको आवज गुन्जिन्छ । जाडोमा बिहान अबेर उठ्नेहरु हतार हतार रित्ता ड्रम, ग्यालिन र गाग्रो बोकेर दौडिदै पानीको धारामा पुग्छन, र तछाड मछाड गर्दै एक पछि अर्को गर्दै पानी थाप्न थाल्छन । केही ड्रममा भएको पानी खाली गर्न धमाधम लुगा धुदै गरेका भेटिन्छ । केही दिन यता पाँचथरको सुख्खाक्षेत्र कुम्मायक गाउँपालिकामा यस्तै रोचक दृश्य देख्न पाइन्छ । खानेपानी अभावमा काकाकुल बनेको कुम्मायकवासीले डिप बोरिङबाट निकालिएपछि राहतको महसुस गरेका छन । कुम्मायक–४ रानिगाउँमा डिप बोरिङमार्फत पानी निकालेपछि पानी थाप्न स्थानीयको लर्को दिन प्रतिदिन बढ्दै गएको छ । पानीको परिक्षण गर्द
१,०८२ पटक पढिएको
५२३ विद्यार्थीको एकसाथ कवाज
धरान । राष्ट्रिय सेवा दलद्वारा सञ्चालित ४५ औं जुनियर डिभिजन तालिममा एकसाथ ५२३ विद्यार्थीहरू कवाज गरेका छन् । दोस्रो चरण अन्तर्गतको जुनियर डिभिजन तालिममा प्रदेश १, २ र ५ नम्बरका स्कुलका विद्यार्थीहरू सहभागी थिए । उनीहरूले तीन महिनासम्म राष्ट्रिय सेवा दल पूर्वी तालिम शिक्षालयमा तालिम लिएका थिए । तालिमको समापनको अवसरमा विभिन्न १५ वटा स्कुलबाट सहभागी विद्यार्थीहरूले एकसाथ कवाज प्रदर्शन गरेका हुन् । त्यसक्रममा खोटाङको सरस्वती मावि बेष्ट प्लाटुन घोषित बनेको छ । उत्कृष्ट प्लाटुन घोषित भएको माविलाई सैनिक तालिम तथा डक्ट्रिन महानिर्देशनालय महानिर्देशक उपरथी गौरब तण्डुलले ट्रफी प्रदान गरे । त्यसक्रममा
१,३२२ पटक पढिएको
झापा भद्रपुरकी पूजा श्रेष्ठ बनिन् नवौं मिस पूर्वाञ्चल
धरान । मिस पूर्वाञ्चलको नवौं संस्करणको ताज झापा भद्रपुरकी पूजा श्रेष्ठले जितेकी छन् । धरान–१५ स्थित होटल इजि राइडर्समा शनिबार राति सम्पन्न ग्राण्ड फिनालेमा उनले प्रमुख निर्णायक मिस नेपाल वल्र्डकी शृङ्खला खतिवडाले सोधेको प्रश्नको सटिक जवाफ दिदै ताज पहिरिएकी हुन् । त्यस्तै धनकुटा हिलेकी अनिला क्षेत्री फष्ट रनरअप बनिन् भने मिस इटहरीसमेत बनिसकेकी तपस्या रणपहेली सेकेण्ड रनरअप बनेकी छन् । प्रतियोगितामा १४ सुन्दरी अन्तिम स्पर्धामा थिए । टप १४ बाट टप १० हुदै टप ५ बाट छनौट गरिएको थियो । अन्तिम पाचमा अनिला क्षेत्री, पूजा श्रेष्ठ, इजिना राई, तपश्या रणपहेली र सस्टिका विसङ्खे पुगेका थिए । सिल्भर इन
प्रकाशित मितिः पुष १४, २०७५
राज्यबाट हेपिएको शारीरिक सुगठन
धरान/शारीरिक सुगठन भन्ने बित्तिकै धेरैको मानसपटलमा ‘मसल्स’ बनाउने भन्ने बुझाइ हुन्छ । तर, यथार्थमा यो खेल हो । इण्डोर खेल । राष्ट्रिय खेलकुद परिषद (राखेप) ले यसलाई खेलका रूपमा समेटेको छ । तर, उपेक्षामा छ । यो खेलका लागि राखेपले कुनै खर्च गर्दैन । शारीरिक सुगठनमा सहभागी खेलाडी तथा सङ्घको राखेपप्रति यस्तै आरोप लाग्छ । इन्टरनेशल फेडेरेसन अफ बडी बिल्डिङ (आइएफबीबी) अन्तर्गत नेपाल फेडेरेसन अफ बडि बिल्डिङका सल्लाहकार तथा पूर्व खेलाडी राजभगत प्रधानाङ्ग भन्छन्, ‘राखेपले यसलाई खेलनै मान्दैन । राष्ट्रले बडि बिल्डिङ हेर्दै हेर्दैन । फुटबललाई मात्रै हेर्छ ।’ शारीरिक सुगठनको अन्तर्
कीर्ते जग्गा खरिदमा न्यायिक समिति सदस्यको पद चट्, वडासचिव कारबाहीमा
पथरी । कीर्ते गरेर जग्गा किनेको आरोपमा पथरीशनिश्चरे नगरपालिकाको न्यायिक समितिको एक सदस्यको पद खुस्किएको छ । नगरको न्यायलमा जनताको न्याय सम्पादन गर्न सदस्यमा नियुक्ती भएको दुर्गा सिटौलाको सदस्यको पद फुस्केको हो । सिटौला वडा नम्बर १,बाट वडा सदस्यमा निर्वाचित जनप्रतिनिधि हुन् । न्यायपालिका सदस्य दुर्गा सिटौला र वडा नं. ३ का वडासचिव कमल भट्टराईको मिलेमतोमा वडा नम्बर २, मा रहेको द्रुपदा गजुरेलको कित्ता नम्बर ५१० र १४१ को साढे १० कट्ठा जग्गा किर्ने गरी दुवैजनाले किने पछि विवाद आएको थियो । न्यायीक समितिका सदस्य सिटौलाले आफ्ना श्रीमती कमला देवि सटिौला र वडा सचिव भट्टराईले आफ्ना श्रीमती गंगादेवी भट्
१,६३३ पटक पढिएको
वर्तमान सरकारले संघीयता कार्यान्वयन गर्दैन– डा.कोइराला
मधुमल्ला/ नेपाली कांग्रेसका केन्दीय सदस्य तथा प्रभावशाली नेता डा.शेखर कोइरालाले बर्तमान सरकार संघियता कार्यान्यवन नगर्ने तर्फ उन्मुख भएको आरोप लगाएका छन् । शनिबार मोरङ मिक्लाजुङमा नेपाली कांग्रेस मिक्लाजुङले आयोजान गरेको वृहत कार्यकर्ता भेला तथा परिचयात्मक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै कोइरालाले सो कुरा बताएका हुन् । नेपाली कांग्रेस जनताको पार्टी भएकाले सधै जनताका पक्षमा लागि पर्ने बताए । निरन्तर जनताको सेवा गर्ने बताए । बर्तमान सरकारले भ्रष्टचार लाई संस्थागत गर्दै जनताको ढाड सेक्न लागि परेको बताए । बर्तमान सरकार ८० प्रतिसत किशान रहेको मुलुकमा किशानका लागि आवस्यकताहरुको समेत प्रवाह नगरी किशानला
‘गुरूलाई ढाँट्दा पिटाइ खाइयो’
भाइबहिनी हो आज हामी प्रा.डा. भोलानाथ पोखरेलको सानो छदा पस्किने प्रयास गरेका छौं । आधुनिक नेपाली सामाजिक यथार्थवादी उपान्यासको पात्र विधानमा पिएचडी गरेका डा. पोखरेलका विद्यार्थी कालका कष्टलाई तपाइहरू सामू पस्किने प्रयास गरेका छौं । उनको विद्यार्थी काल आम मानिसभन्दा फरक रह्यो । बुबा संस्कृत पढाउन चाहान्थे । संस्कृतमा विद्वान बनाउन चाहान्थे । अङ्ग्रेजीलाई गाई खाने भाषाको रूपमा चित्रित गर्थे । तर, अन्तत्वोगत्वा त्यही बुबाको छोराले संस्कृत पढ्ने अवस्था रहेन । २०१२ साल साउन १७ गते धर्तीमा पाइला टेकेका धनकुटा डाँडागाउ नाम्फूका पोखरेल संस्कृत पढ्नका लागि भारतको वनारससम्म पुगे । तर, विविध कारणले एक व
३९९ पटक पढिएको
ताप्लेजुङकाे तापक्रम १ डिग्रीमा झर्याे
ताप्लेजुङ । पूर्वी हिमाली जिल्ला ताप्लेजुङको तापक्रम शनिबार यस वर्षकै कम मापन भएको छ । पूर्वी क्षेत्रीय हावापानी फिल्ड कार्यालय ताप्लेजुङका अनुसार, ताप्लेजुङको शनिवार बिहानको तापक्रम १ डिग्री छ । यसअघि शुक्रवार ४ दशमलब ८ डिग्री मापन गरिएको थियो भने दिउँसोको तापक्रम १३ डिग्री सेल्सियस मापन गरिएको हावापानी फिल्ड कार्यालय ताप्लेजुङले जानकारी दिएको छ । सदरमुकाम फुङ्लिङमा नै १ डिग्री सेल्सियस मापन गरिँदा माथिल्लो क्षेत्रको तापक्रम माइनसमा झरेको छ । यस अघि शुक्रवार दिउँसो जिल्ला सदरमुकामको सुकेटार क्षेत्र सम्म हिमपात भएको थियो ।
४२७ पटक पढिएको
शिवरामलाई एक स्ट्रोकले पछि पार्दै शीर्षमा उक्लिए रवि
धरान/३६ होलको समाप्तिमा प्रो. रवि खड्का सूर्य नेपाल इस्र्टन ओपन टुरमा प्रो. शिवराम श्रेष्ठलाई एक स्ट्रोकले पछि पार्दै शीर्षस्थानमा उक्लिएका छन् । धरानको निर्वाणा कन्ट्री क्लब तथा गल्फ रिसोर्टमा बिहीबार दोस्रो दिनको खेलमा एक ओभर ७१ कार्ड बनाएका रविले नेपालमा नम्बर वन प्रो. शिवराम श्रेष्ठलाई एक स्ट्रोकले पछि पारे । समग्र ३६ होलको समाप्तिमा पनि १ स्ट्रोकले नै पछि पारेका हुन् । शिवराम दोस्रो दिन २ ओभर ७२ कार्ड बनाए । रविले ३६ होलको समाप्तिमा ३ अण्डर १३७ खेल्दा श्रेष्ठले २ अण्डर १३८ खेलेका हुन् । घरेलु एमेच्योर शुक्रबहादुर राईले दोस्रो दिन उत्कृष्ट प्रदर्शन गर्दै प्रो. रवि र शिवरामलाई १ र २ स्ट्रो
प्रकाशित मितिः पुष १२, २०७५
४३७ पटक पढिएको
बिरामीको मृत्युबारे ...
आजको राशिफल, माघ ८ ग ...